Taangiga GFS, waxaa loo qaybin karaa aagagga loogu talagalay daaweynta bullaacadda, ku habboon oo dabacsan, naqshadeyn dabacsan. Qaabka naqshadeynta iyo habeynta GFS 1. Kooxda naqshadeynta naqshadeynta BSL waxay bixin doontaa adeeg naqshadeyn deg-deg ah markay hesho baaritaanka, qaabeynta heerka waafaqsan AWWA D103-09, iyo heerarka caalamiga ah ee OSHA ee cabbirka haanta naqshadeynta taangiga. 2. Iyada oo leh mashiinka goynta sare iyo khadka soosaarka dhalada dhaldhalaalka ah, awoodda wax-soo-saarkeenna waxay gaari kartaa 160 go' / maalin, waana in la iska hubiyaa sheeko kasta ...
Qaybta daaweynta bullaacadda
Taangiga GFS, oo si sahlan loo rakibi karo, wuxuu si aan kala sooc lahayn isugu dari karaa aagagga daaweynta bullaacadda kala duwan, si loo gaaro saameynta daaweynta daaweynta bullaacadda oo wanaagsan, iyo isku xirnaanta daaweynta. Nooca Sheegashada Nooca Gaarka ah Midabbada Mawjadda midabka cagaaran, caddaan, buluug, midab ayaa lagu habeyn karaa markaad codsato Maaddada Dahaarka ah 0.25 - 0.40mm, laba-koobo Acid iyo caddeynta alkalinity Xaashida caadiga ah PH: 3 - 11 Xaashi gaar ah PH: 1 - 14 Adhesion 3450 N / N cm Celcelis la mid ah xaashi bir ah, qiyaastii 500 K ...
Taangiyada loo yaqaan 'Custom tank', ee loogu talagalay daaweynta biyaha wasakhda ah, waxay kuxiran tahay baahida macaamiisha. Kala duwanaanshaha u dhexeeya taargooyinka birta waa mid is bedbeddelaya, oo leh qaab isku-dhafan oo taargooyin bir ah iyo isku xirka isku-xiridda, iyo sheyga khaaska ah ee ku dhegan isugeynta labada taarikada, gaarista shuruudaha rakibaadda ee isticmaalka degdegga ah iyo kan hoose. daboolida saxanka birta dhaldhalaalka ah ee taangiga ayaa joogteyn kara cadaadiska 5kpa, taangiga sidoo kale waxaa lagu dari karaa xuubka methane storag ...
Qayb muhiim ah oo ka mid ah daaweynta biyaha, fadlan u sharax sifaha gaarka ah iyo cabbirrada kahor.